Lakdhar Brahimi : « Tohizana ny sori-dalana… » | NewsMada
Lakdhar Brahimi : « Tohizana ny sori-dalana… »
Anisan’ny noraisin’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, afakomaly teny Faravohitra, ny iraka manokana avy amin’ny Vondrona afrikanina, Lakdhar Brahimi. Nambarany ny tokony hanohizana ny fampiharana ny sori-dalana.
Ankoatra izany, anisan’ny nanontaniany ny filoha teo aloha ny fahitana ny fahantrana eto amintsika sy ny fametrahana ny tany tan-dalàna. « Tsy misy ny fifampitokisana eo amin’ny samy Malagasy. Fa eo koa ny tsy fisian’izany eo amin’ny mpitondra sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena », hoy Ravalomanana.
Nohararaotina izao fihaonana izao niresahana ny olan’ny tany eny Andohatapenaka ka nangatahan’i Brahimi ny tokony hanaovan’ny filoha teo aloha ny antonta-kevitra momba izany, ahafahana mijery sy mamaha ity olana ity.
Tsiahivina fa noraisiny teny Faravohitra nialoha izany, nanao veloma handao an’i Madagasikara, ny ambasadaoron’i Afrika Atsimo, G. Grobler.
Mitohy kosa ny fihaonan’i Brahimi amin’ireo mpanao politika sy lehiben’ny andrimpanjakana amin’izao diany eto amintsika izao, hanao tombana ara-politika.